Clooney, George, George Clooney, mpilalao
George Timothy Clooney(* 6. 1961 Lexington May, Kentucky) dia American mpilalao sarimihetsika, talen, mpamokatra sy screenwriter, zanak'i TV mpanolotra sy ny zana-drahalahin'i Nick Clooneho ny mpihira sy mpilalao sarimihetsika Rosemary Clooney Ferrer Jose.
Ny fampisehoana ny mpilalao dia nitondra azy telo Globes Golden. Nahazo Oscars roa ihany koa izy - iray ho an'ny anjara asan'ny mpanohana tsara indrindraSyrianaary ny iray hafa ho an'ny asa mahomby (miaraka amin'i Affleck sy Hesel) mankany amin'ny mpandrobaArgo, izay nahazo ny sokajy tsara indrindra. Ao amin'ny tantaran'ny Akademia Loka, izy no solontenan'ilay mpanakanto tokana izay nomena sokajy enina.
Fantany amin'ny fikatrohany ara-politika izy. Avy amin'ny 31. Janoary 2008 hatramin'ny Aprily 2014Izy no mpiandraikitra ny fiadidiana ny Firenena Mikambana.Ny asa fanasoavan'i Hercu dia nahitana ny ezaka hitadiavana vahaolana amin'ny fifandirana ao Darfur, miaraka amin'ny famatsiam-bola ho fanohanana ireo niharan'ny fanafihan'ny mpampihorohoro avy amin'ny 11. September 2001, ny Tsunami Ocean 2004, ary ny horohorontany tany Haiti 2010, izay nandraisany ny fampisehoana ny Hope for Haiti Now concert. Mba hanairana ny fahatsiarovan-tena amin'ny krizy maneran-tany dia nanao ilay fanadihadiana izySandry sy alahelo. Tafiditra ao koa ny mpikambana ao amin'ny Filankevitry ny Fifampiraharahana avy any ivelany, ny fikambanana tsy miankina Amerikana ary ny fisaintsainana, izay, indraindray, mamoaka bimonthlyForeign Affairs.
Gazety TelevizionaTV GuideNy mpandray anjara amin'ny 2005 dia namorona ny 1. raha tokony ho "50 ireo kintana malaza indrindra amin'ny fotoana rehetra".Clooney dia miseho eo amin'ny lisitr'ireo olo-malaza manintona indrindra.
Teraka tao 1961 tao Lexington, Kentucky, tamin'ny volana Mey izy.Nina Bruce (teraka Warren, teraka 1939)dia ilay mpanjakavavin'ny hatsarana fahiny. I Nick Clooney, Ray mpandinika ny fahitalavitra, dia nikarakara ny American Movie Classics. Ny fakan'i Clooney dia mandeha any Irlandy, Alemana, Angletera, ary ireo razambenana lavitra kokoa niaina tany Ecosse sy tany Holandy.Ny raibeny sy renibeny, Nicholas Clooney (avy amin'ny faritr'i Kilkenny) sy Bridget Byron, nifindra monina tany Irlandy.Jeneraly efatra teo an-dàlambe no razambe Mary Ann Sparrow, lehilahy iray nantsoina hoe Nancy Hanks, izay zanany lahy no filoham-pirenena voalohany Repoblika amerikana, Abraham Lincoln.
Clooney dia manadihady trano fonenan'ny White House miaraka amin'ny Filoha Barack Obama ao amin'ny Darfur Conflict, October 2010
Ny mpilalao dia manana anabavy zokiny Adelia. Ireo mpitaiza dia mpandray anjara Miguel sy Rafael Ferrero, izay zanaky ny nenitoany sy mpihira Rosemary Clooney sy ny dadatoany, mpilalao sarimihetsika José Ferrer. Ny fifandraisany dia mifandray amin'ny mpihira Debbie Boone, izay nanambady ny zanak'olo-mpiray tam-po amin'i Gabriel Ferrero (zanak'i José Ferrer sy Rosemary Clooney).
Nino i Clooney tamin'ny finoana katolika fatratra.Nanatrika sekoly tao amin'ny Sekoly Fanomezana Masindahy tao Fort Mitchell, Kentucky izy. Nandany ny fahazazany tany Ohio izy, izay nanatrehany ny St. Colombia. Sekolin'i Michael, ary eo anelanelan'ny sekoly 1968-1974 sy Western Row ary St. Sekoly Susanna any Ohio Mason. Tamin'ny fotoan'ny kilasy fahafito, dia niverina tany Kentucky ny fianakaviana.
George Clooney tamin'ny Janoary 2012
Ao amin'ny Sekoly Ambony Sekoly Ambony, nipoitra ny polisy Bell, izay nanohina ny tendrony ambony sy ambany teo amin'ny lafiny iray amin'ny tarehiny. Ny fanasitranana dia natao tao anatin'ny herintaona. Tamin'ny resadresaka momba ny diaryDaily MirrorApril 2003 dia niteny hoe:Io no fotoana ratsy indrindra teo amin'ny fiainako. Fantatrao fa mety ho lozabe ny ankizy. Tonga saina aho, saingy nanatanjaka ahy izany zavatra niainana izany".
Taorian'ny nifindran'ny ray aman-dreniny tany Kentucky Augusta, dia nanomboka nianatra tao amin'ny sekoly ambony High School Augusta izy. Araka ny fanehoan-kevitr'ilay mpilalao dia nametraka ny fitsapana rehetra ho an'ny taom-piadanana A na B.Anisan'ireo mpilalao baolina kitra sy mpilalao basketball izy. Tao amin'ny 1977, niezaka ny hiditra ao amin'ny ekipa mpilalao baolina matihanina Cincinnati Reds izy izay nilalao nefa tsy nahazo tolotra fifanekena. Nesorina izany tamin'ny fihodinana voalohan'ny ekipa.
Nandritra ny taona 1979-1981 dia lasa mpianatra tao amin'ny Northern Kentucky University izy, izay nianarany ho foto-drafitrasan'ny fanaovan-gazety amin'ny fahitalavitra. Nanatrika fohy tao amin'ny Oniversiten'i Cincinnati ihany koa izy, saingy tsy nisy ny oniversite nahavita.Indraindray dia nanao vola izy tamin'ny fivarotana akanjon'ny lehilahy sy ny fihinanana paraky.
2: Fanantenana ho an'i Haiti Ankehitriny
4: aorian'ny famafàna mamaky
5: 72. Golden Globe Award Taona
7: Night Animals (Sarimihetsika)
8: Naman'i Danny
9: Midurbicon: Vorona maizina
10: Rahalahy, aiza ianao?
11: 79. ny Oscars
12: Ary tsy hanana fanapahan-kevitra ny fahafatesana
13: mpiadin'ny ONU
16: Teny martsa
17: Gravity (Sarimihetsika)
20: Ny alina tsara sy ny vintana tsara
21: 2002 ao amin'ny sarimihetsika
22: Valo ny Ocean
23: Tranom-bakoka Madame Tussaud
24: Globe Golden ho an'ny mpilalao sarimihetsika tsara indrindra (Comedy / Musical)
26: 1961 ao amin'ny sarimihetsika
27: Ny vidin'ny Cecile B. DeMilla
28: Lean eo amin'i Pete
29: Ny Globe Golden ho an'ny mpilalao tsara indrindra
30: Tavoahangy enina telo kely somary ambadiky Ebbing
32: 82. ny Oscars
36: Globe Golden ho an'ny mpilalao sarimihetsika malaza (tantara an-tsehatra)
37: Lisitry ny mpanakanto amin'ny lamin'ny Art sy ny literatiora
39: Globe Golden ho an'ny Screenplay Best
42: Tiavo ny mpamono anao
43: mpiara-miasa amin'i 2 an'i Danny
44: mpiara-miasa amin'i 3 an'i Danny
46: Fantatr'i Mr. Lišák
47: 69. Golden Globe Award Taona
48: Batman sy Robin
Spy Kids 3-D: ny lalao mahery dia fitohizan'ny ny sarimihetsika Spy Kids in Action sy 2 Spy Kids: Island ny Very snů.Tentokrát tsy misolo tena toerana lehibe eo amin'ny Carmen fa anadahiny juin Juni.PříběhMladý miasa ao an-mpitsongo fahafahana misafidy, mba hahafahany hahazo vaovao Lalao an-tserasera an-tserasera noforonin'i Sylvester Stallone. Tsy mikasa ny hiantso OSS ho fanampiana izy satria izy no mpitsabo tsara indrindra. Tsy ela anefa dia miantso antsika ny Filoha (George Clooney), ary nilaza izy fa ny anabaviny Carmen nanjavona. Ny volana Jona dia manaiky ny hametrahana ny tontolo virtoaly amin'ny lalao ary handrava azy ao anatin'ny roa tolakandro. Tsy maintsy mamakivaky andian-dahatsoratra dimy izy ary misafidy fanamafisana. Mifidy ny raibeny, izay nanana ady tamin'i Hračkářem, ary te hamaly faty, nefa Juny mahalala. Teny an-dalana ho any amin'ny fandringanana fihaonana olona vaovao: Reze, Arnold sy Francis, izay mihevi-tena superhráč. Jona dia mahita zazavavy tsara tarehy ao amin'ny Demetrius Arena, izay atolony ho an'ny 3. Ao amin'ny 4. Nihaona tamin'i Carmen ry zareo ary nandeha izy ireo. Mandritra izany fotoana izany, ny sisa tamin'ny Oss mahita ny marina momba Hračkáři, ary dia toy izany no miezaka hanimba ny ankizy sy handao azy tsy ho lalao na dia manameloka izao tontolo izao amin 'ny famongorana. Tonga amin'ny 5 i June amin'ny alàlan'ny OSS. pifidianana. Efa ringana, saingy afa-nandositra ary nampiditra Hračkář izao tontolo izao ho any 3D ady. Na dia miantso ny mpiasa rehetra aza dia tsy maintsy manao izany ny raibe iray.
Mifanakaiky (ny anaran-tsokosoko tamin'ny Aogositra: Osage County) dia sarimihetsika sarimihetsika amerikana sy tragicomedy an'ny 2013, mifototra amin'ny lalao nahazo ny Pulitzer Prize August August: Osage County. Mpanoratra mpanoratra John Wells dia anisan'ireo mpamokatra, anisan'izany George Clooney, Jean Doumanian, Grant Heslov, Steve Traxler, Bob Weinstein ary Harvey Weinstein. Ny premier dia 9. September 2013 ao amin'ny Fetiben'ny Sarimihetsika Toronto.
Burn After Reading dia sarimihetsika amerikana avy amin'ny XenXo ao Coen. George Clooney, John Malkovich, Frances McDormand, Tilda Swinton, Richard Jenkins ary Brad Pitt dia niseho tamin'ny andraikitra lehibe.
Ny Golden Globe Awarding Year dia notontosan'ny 11. Janoary 2015 ao amin'ny Hotel Beverly Hilton any Beverly Hills, Los Angeles. Gala ho an'ny fanintelony no nampifanarahan'ireo mpivady mpilalao sarimihetsika Tina Fey sy i Amy Poehler. Ny Fikambanana Hollywood an'ny Foreign Journalists dia nanambara ny fanendrena ny 11. Desambra 2014. Ny Golden Globe dia lasa zanakavavin'ny Mpanazava ny Golden Globe ary Frasier Kelsey Gramer Greer Grammer. Ny Cecil B. DeMilla Award ho an'ny fanatontosana ny fiainana amin'ny endriky ny horonan-tsary dia nahazo ny tale, ny mpamokatra, ny mpanoratra ary ny mpilalao George Clooney.
Miguel Ferrer (7. 1955 Febroary Santa Monica, California - 19. 2017 Janoary in Los Angeles) Firenena Etazonia herec.Život Teraka toy ny lahimatoa zanak'i Jose Ferrer sy Rosemary Clooney. George Clooney ny zanak'olo-mpiray tam-po aminy. Nobeazina sy nianatra tany Beverly Hills izy. Izy no nanao ny sarimihetsika voalohany, ilay lehilahy tsy teo, ary niseho tao amin'ny Star Trek III: Search Spider-Man (1983). Tao anatin'ireo taona maro ho avy, dia nahazo anjara bebe kokoa izy, ka ny sarimihetsika malaza indrindra dia ny Robocop, 1984 Hot Shots and Traffic - ny fitsipi-pitenenan'ny gang.
Night Animals (Animals Nocturnal) dia mpamono Amerikana ara-psikolojika avy amin'ny 2016. Tom tarihan'i Tom Ford. Ny horonantsary dia nentanin'ny tononkalo nataon'i Austin Wright sy Tony sy Susan. Ny anjara asam-pokonolona dia nalain'i Amy Adams, Jake Gyllenhaal, Michael Shannon, Aaron Taylor-Johnson, Isla Fisher, Armie Hammer, Laura Linney, Andrea Riseborough ary Michael Sheen.
Ireo naman'i Danny (niandohana ny Ocean's Eleven) dia sarimihetsika Amerikanina avy amin'ny 2001. Remake of Danny's Eleven from 1960. Ny talen'ny Steven Soderbergh dia George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon, Don Cheadle, Andy Garcia ary Julia Roberts. Ny sarimihetsika dia fahombiazana goavana tsy ara-bola fotsiny fa koa fanakianana. Steven Soderbergh dia nitarika roa hafa, ny sarimihetsika 2 mpiara-miasa amin'i 2004 sy Danny 3 ao amin'ny 2007.
Fanomezana vohikala: Suburicon Dark (Anglisy) dia sarimihetsika Amerikana momba ny heloka bevava avy amin'ny 2017. Izany dia notarihin'i George Clooney, mifototra amin'ny toe-javatra iray izay nahatonga ireo rahalahy Coen sy Grant Haslov koa. Maty i Matt Damon, Julianne Moore sy Oscar Isaac.
Rahalahy, aiza ianao? (Anglisy Momba ny Rahalahy, Aiza Ianao?, 2000) dia sarimihetsika amerikana avy amin'ny 2001. Ity dia singa iray hafa avy amin'ny asan'ireo mpilalao horonantsary malaza Joel Coen sy Ethan Coen. Ny horonantsary dia mifototra amin'ny tantaran'ilay Odyssika tamin'ny teny Grika fahiny, ilay poety Grika Homer. Efa nanambara ny tantaran'ny telo voaheloka (Everett, Pete sy Delmar), izay, rehefa avy nandositra tany am-ponja, fandehanana any amin'ny toerana izay ny iray tamin'izy ireo (Everett, nilalao tamin'ny George Clooney) talohan'ny harena nalevina am-ponja. Ao amin'ny horonantsary, amin'ny heviny miainga mahita tarehin-tsoratra maro aingam-panahy avy tononkalo fahiny, fa tsy nisy ny angano fotoam-Fahiny Gresy, fa ny Amerikana Atsimo Andrefana Mississippi amin'ny fotoana 30 krizy ara-toekarena. taona.
Oscars dia natao tao amin'ny Kodak Theater tao Los Angeles 25. Febroary 2007. Ny loka dia nanomboka tao amin'ny 5.30 teo an-toerana ary tao anatin'ny ora vitsivitsy dia nanome loka tamin'ny sokajy 24 ny Academy of Motion Picture Arts sy ny siansa. Ellen DeGeneres no tompon'andraikitra nahazo ny loka, ary nomena io fotoana io voalohany. Ny sarimihetsika tena nankasitraka dia ny "Identity Hidden Hidden" an'i Martin Scorsese, izay nahazo mari-pankasitrahana efatra. Ny mifanohitra amin'izany aza, ny tena nomena ny Dreamgirls - valo ny isan'izy ireo. Fanendrena maro no nahazo an'i Babel.
"Ary tsy hanana fanapahan-kevitra ny fahafatesana" dia tononkalo poeta Dylan Thomas poeta. Ny anaran'ilay tononkalo dia avy amin'ny Taratasy ho an'ny Romana, izay ao anatin'ny Testamenta Vaovao. Niseho voalohany tao amin'ny 1933 tao amin'ny nomerao ny The New English Weekly tamin'ny Mey. Tamin'ny volana septambra 1936 dia namoaka tononkalo iray tao anatin'ny tahiry amina fanoratana roa amby roapolo. Ny mpiangaly George Clooney dia mamerina ampahany amin'ny tononkalo ao amin'ny sarimihetsika Solaris 2002. Ilay tononkalo mpilalao mozika sy mpamoron-kira John Cale dia nandefa ity tononkalo ity tamin'ny 2016 tao amin'ny fampisehoana tao Cardiff, hoy i Michael Sheen.
Firenena Mikambana Iraka Milaza Fiadanana (anglisy Firenena Mikambana Iraka Milaza Fiadanana) dia anaram-boninahitra nomena ny Firenena Mikambana "miavaka olona, ​​tsara fidiana avy ao amin'ny sehatry ny zavakanto, mozika, boky aman-gazety sy ny fanatanjahan-tena izay nanaiky hanampy hifantoka maneran-tany ny saina ny asan'ny Firenena Mikambana".
Ave, Caesar! (Original anglisy Arahaba, Kaisara!) No Britanika-Amerikana sarimihetsika hatsikana 2016 ny taona, izay nanoratra, namokatra, ka nitarika sheared Coenové.Ve Ry rahalahy, starring Josh Brolin, George Clooney, Alden Ehrenreich, Ralph Fiennes, Jonah Hill, Scarlett Johansson , Frances McDormand, Tilda Swinton, ary Channing Tatum. Ny horonantsary dia tantara noforonina izay lasa tena, ary Eddie Mannix, izay miasa ao amin'ny sarimihetsika Hollywood orinasa ao an-dimam-polo, ary miezaka ny hamaha ny toe-javatra misy ny tena mpilalao nanjavona nandritra ny filming.
Emergency (English ER) dia sehatra ara-pahitalavitra Amerikana mampihetsi-po, noforonina mpanoratra, mpanoratra ary mpanolotra fandaharana amin'ny fahitalavitra Michael Crichton. Ny voalohany dia niseho tao amin'ny fahitalavitra TV ny 19. September 1994 tao amin'ny fahitalavitra amerikana NBC. Ny tantara dia miseho amin'ny ankapobeny ao amin'ny departemantan'ny fitsaboana ao amin'ny hopitaly fanta-daza ao amin'ny Cook County, Chicago. Ny andian-tantara dia novokarin'ny Constant c Productions sy ny Amblin Entertainment niaraka tamin'ny Warner Bros. Television Production, Inc.
Ireo marin'ny March na The Ides of March dia mety: Ny volana martsa - ny andro ao amin'ny kalandrie Romana mifanaraka amin'ny 15. březnuDen famadihana (amin'ny teny anglisy am-boalohany ny Ides Martsa) - Ny sarimihetsika, izay nitarika ny George Clooney (2011) Ides Martsa (boky) (amin'ny teny Anglisy am-boalohany ny Ides Martsa) - ny tantara amin'ny alalan'ny Amerikana mpanoratra Thornton Wilder (1948) Ny Ides Martsa ( vondrona) - Baiboly tarika "Ides Martsa" - ilay hira mpihira John Cale sy Terry Riley namoaka tao amin'ny rakikira Fiangonan'i ny vain'omby (1971) "ny Ides Martsa" - Tonon-kiran'i anglisy mozika tarika Iron zazavavy navoaka tao amin'ny rakikira Mpamono (1981)
Gravity (Anglisy Gravity) dia sarimihetsika fiction amerikana tarihan'i Alfonso Cuaron avy amin'ny 2013. Ny anjara asan'ny mpandositra avy any an-tsambo dia nalain'i Sandra Bullock sy i George Clooney.
Charles Jerome "Jerry" Weintraub (26. 1937 Septambra, Brooklyn, New York - 6. 2015 Jolay, Santa Barbara, California) Firenena Etazonia mpitantana ara-kolontsaina, fampisehoana mampiroborobo, sarimihetsika sy ny televiziona mpamokatra. Izy koa dia filohan'ny Artists United.
Cheryl Ann Fernandez-Versini (* 30. 1983 Jona teo Tyne Newcastle, any Angletera, née Cole Tweedy tatỳ aoriana) dia anglisy mpihira sady mpikambana ao amin'ny vondrona zazavavy Britanika Girls mafy. Teraka toy ny fahefatra ao ny baikon'i dimy mpiray tam-po (telo rahalahy sy rahavavy). Iray tamin'ireo jiolahy britanika X-Factor izy. Husband nanana Ashley Cole mpilalao baolina kitra ao amin'ny 2010 nisara-panambadiana. Nanambady indray i 7. Jolay 2014 ny Frantsay, Jean-Bernard Fernandez-Versiniho. Ny lehibe indrindra no lasa elon'aina Hits, Miadia ho amin'izany ny: Antsoy My Name, na angamba Promise ity
Tsara ny alina sy ny tsara vintana (tany am-boalohany Night tsara, ary Vintana) dia mainty hoditra Amerikana sarimihetsika George Clooney ny fitarihan 'ny avy any 2005. Izany dia mifototra amin'ny tena zava-mitranga sy ny toe-javatra zaobývá ao amin'ny CBS fahitalavitra in 50. taona 20. taonjato, ny fotoana atao hoe. McCarthyism, izany hoe. isaky ny mandeha ny mafy manohitra ny Kominisma, izay maro no fitsarana Amerikana kokoa na tsy marina ny fiampangana ny fiaraha-miasa amin'ny Firaisana Sovietika sy / na ny Antoko Komonista USA. Manokana, dia milaza ny tantaran'ny fanadihadiana ny raharaha amin'izao fotoana izao fandaharana ny fahitanareo azy izao, sy ny mpamorona, Edward Roscoe Murrow, Fred sy Friendly ny Joseph Wershby. Ny sarimihetsika ny anaram-boninahitra dia notakarina avy amin'ny didim-pitsarana, izay Edward R. Murrow namerina tamin'ny faran'ny ny fampisehoana - "Tsara alina, ary ny Vintana Tsara", ny Czech "Tsara vintana alina sy ny tsara". Ny horonantsary dia voatendry nandritra ny enim-Oscars, anisan'izany ny sarimihetsika tsara indrindra Oscar, fa tsy nahazo valiny tsy iray, fa no nalaza noho ny American Film Institute ho iray amin'ny folo sarimihetsika tsara indrindra ao anatin'ny taona, ary koa ny Stanley Kramer Award.
Movies ny sarimihetsika 2002České Raha mila fanazavana fanampiny, dia jereo ny lisitry ny Czech sarimihetsika # 2002.ABCDTOPOL (ny fitarihan 'Filip Remunda) Angel Face (ny fitarihan' Zdeněk Troška) Brak (ny fitarihan 'Karel Spěváček) Fimfárum Jan Werich (ny fitarihan' Vlasta Pospíšilová sy Aurel Klimt) Jan 69 (ny fitarihan 'Stanislav Milota) Ampakarina amin'ny lehibe tongotra (ny fitarihan' Viktor Polesný) tanàna B (ny fitarihan 'Filip Remunda) Taona' ny devoly (ny fitarihan 'Petr Zelenka) Brats (ny fitarihan' Zdeněk Tyc) Trip (ny fitarihan 'Alice Nellis) Foreign filmy8 vehivavy (ny fitarihan 'François balon) fampifanarahana (ny fitarihan' Spike Jonze) The Bourne Identity (ny fitarihan 'Doug Liman) Asterix sy Obelix: Mission Kleopatra (ny fitarihan' Alain Chabat) Balto 2: ny amboadia ny lalana (ny fitarihan 'Phil Weinstein), Red dragona (tale Brett Ratner) Long fomba (horonan-tsary) (tale: Adam Shankman) Die andro hafa (ny fitarihan 'Lee Tamahori) ranomandry Age (ny fitarihan' Chris anja sy Carlos Saldanha) Equilibrium (ny fitarihan 'Kurt Wimmer) Femme Fatale (ny fitarihan' Brian De Palma) Frida (tale: Julie Taymor) Gangs New York (ny fitarihan 'Martin Scorsese) Harry Potter sy ny Antenimieran'ny-miafina (ny fitarihan' Chris Columbus) Hart ny Ady (ny fitarihan 'Gregory Hoblit) Clock (ny fitarihan' Stephen Daldry) Hero (Tale: Zhang Yimou), Chicago (ny fitarihan 'Rob Marshall) Catch aho raha azonao atao (ny fitarihan 'Steven Spielberg) Interstate 60 (ny fitarihan' Bob Gale) K-19: ny Widowmaker (ny fitarihan 'Kathryn Bigelow) Cat mofo manify (nitarika Hirujoki Morita) Windtalkers (tarihin'ny John Woo) The Scorpion King (tarihin'ny Chuck Russell), Circle (ny fitarihan 'Gore Verbinski) Mpandatsa-dra Alahady (tarihin'ny Paul Greengrass) Lilja (ny fitarihan' Lukas Moodysson) Confessions ny Mampidi-doza Mind (ny fitarihan 'George Clooney) Vitsy An'isa Report (ny fitarihan' Steven Spielberg) Miresaha aminy (tale Pedro Almodóvar) ny Big matavy grika fampakaram-bady (ny fitarihan 'Joela Zwick) sarin'ireo (ny fitarihan' Rudolf van den Berg) ny olona tsy misy lasa (ny fitarihan 'Aki Kaurismäki) lehilahy mainty 2 (ny fitarihan' Barry Sonnenfeld) Naqoyqatsi (ny fitarihan 'Godfrey Reggio) O Schmidt (ny fitarihan 'Alexander Payne) Magdalena ANABAVY (ny fitarihan' Peter Mullan) Tompon'ny amin'ny vava vola; Ny roa Towers (tale Peter Jackson) mpitendry piano (ny fitarihan 'Romanina Polanski) Ny mamy indrindra Zavatra (ny fitarihan' Roger Kumble) Python 2 (tale: Lee McConnell) Rabbit-Porofo Fefy (Tale: Phillip Noyce) Bitro (tarihin'ny David Lynch) Amin'ny Mponina Ratsy (tarihin'i Paul WS Anderson) Mandrosoa! (Tarihin'i Charles Stone III) Mpitan-tsoratra (ny fitarihan 'Steven Shainberg) Spider-Man (ny fitarihan' Sam Raimi)
Ny Ocean's Eight dia sarimihetsika amerikana ho avy atsy ho atsy. Ny talen'ny horonantsary dia Gary Ross. Ny horonantsary dia famerenana ny filma vavy Danny, tarihan'i Sandra Bullock. Izy ireo koa dia milalao an'i Cate Blanchett, Anne Hathaway, Helena Bonham Carter, Rihanna, Mindy Kaling ary Awkwafina. Ny daty voalohany dia napetraka tao amin'ny 8. Jona 2018.
Ny tranom-bakoka Wax Madame Tussaud dia tranom-bakoka malaza eran-tany, monina any Londres, ahitana sampana any Amsterdam, Hong Kong, Las Vegas ary New York sy Vienne. Izy io dia natsangan'i Maria Tussaud, mpanao sary sokitra fanangonam-borona.
Golden Globe ny tsara indrindra mpilalao ao amin'ny hatsikana na mozika nahazo 1951 tsy tapaka hatramin'ny Hollywood Foreign Press Association (Eng. Hollywood Foreign Press Association HFPA fanafohezanteny) tao amin'ny lanonana Globes Golden.
Jocelyn Quivrin (14. 1979 Febroary, Dijon, France - 15. 2009 Novambra, Saint-Cloud, France) Firenena Frantsa herec.Dětství sy studiumNarodil in Dijon, ho any amin'ny fianakaviana ny dokotera lehibe. Izy horonantsary Nianatra tao amin'ny Sekoly Hector Berlioz ao Vincennes ary avy eo dia nahazo diplaoma tamin'ny horonan-tsary sy boky aman-gazety tao amin'ny sekoly any Nanterre. Nandritra ny taona maro izy, ary niasa tao amin'ny tsehatra nanatrika tsy tapaka manao kilasy.
UdálostiArthur Miller sy Marilyn Monroe rozvedli.Odpůrci sarimihetsika ny sivana tany Etazonia efa nandalo taitra mafy, rehefa Fitsarana Tampony namoaka didy fa ny zo amin'ny fahalalahana maneho hevitra dia tsy manohitra, raha toa ka atolotra horonantsary cenzurnímu úřaduPrudce fihenan'ny isan'ny voasivana horonan-tsary, indrindra noho ny vahoaka momba ny lasa ho fady amin'ny intenzitě.Wall Street Journal dia namoaka ny lisitry ny firenena ny famokarana voluminous indrindra ao 60. taona. Ny loha jstálo Japana (400 zana-kazo isan-taona) sy India (360 zana-kazo isan-taona). Izy ireo nanaraka ny Torkia, Gresy sy Egypta ho any amin'i India ary koa ny sarimihetsika saika novokarina manokana noho ny tsena anatiny. Ao amin'ny horonantsary mahazatra firenena, Etazonia, Italia sy Frantsa, dia naka sary herintaona 150 tifitra.
Golden Globe Cecil B. DeMille Award (anglisy Cecil B. DeMille Award) no omena ao amin'ny Golden Globes lanonana isan-taona Hollywood Foreign Press Association (anglisy The Hollywood Foreign Press Association, fanafohezana HFPA) ny androm-piainany zava-bitany eo amin'ny horonantsary. Izy no atao hoe araka ny Amerikana sy ny tale mpamokatra Cecil B. DeMille (1881 - 1959), izay lasa mpihazona ny voalohany.
Lean on Pete dia sarimihetsika britanika britanika avy amin'ny 2017, notarihan'ny talen'ny Andrew Haigh. Ny soratra, nosoratan'ny boky nataon'i Willy Vlautin, dia ny asan'i Haigh ihany koa. Charlie Thompson nibanjina tao Charlie Plummer. Ny anjara asa hafa dia Chloë Sevigny, Travis Fimmel ary Steve Buscemi.
Golden Globe Award ho an'ny mpilalao sarimihetsika tsara indrindra amin'ny fanohanana omena Anjara Asan'ny voalohany tamin'ny Janoary 1944 Hollywood Foreign Press Association (Eng. Hollywood Foreign Press Association HFPA fanafohezanteny) tao amin'ny lanonana Globes Golden.
Ny sarimihetsika telo Ambany Ebbing, Missouri, dia sarimihetsika amerikana avy amin'ny 2017. Notarihin'i Martin McDonagh. Ny anjara andraikitra fototra dia tarihan'i Frances McDormand, Woody Harrelson, Sam Rockwell, John Hawkes ary Peter Dinklage. Ny sarimihetsika dia nalaina tao amin'ny Fetiben'ny horonantsary Venise sy ny Festival Festival International Toronto, izay nahazoany loka mpanatrika. 10 dia navoaka ofisialy tao amin'ny sinema. Novambra 2017. Any amin'ny Repoblika Tseky dia ho tonga voalohany ny 15. Febroary 2018.
John Burke Krasinski (* 20. 1979 Oktobra, Newton, Massachusetts, Etazonia) dia American mpilalao sarimihetsika, tale sy screenwriter. Dia niseho oh. Ao amin'ny horonantsary License ho Wed, dia sarotra: Vonoy mankany isika, nampindrana ny feony ho ny toetran 'Lancelot ao amin'ny sarimihetsika Shrek ny Fahatelo, fa ny lehibe indrindra azy lazany Nahazo ny anjara asan'ny Jim Halpert ao amin'ny andian-dahatsoratra birao.
Fankalazana ny fetiben'ny 82. Ny Oscars dia nomena 7. March 2010. Ny horonantsary Death dia sarimihetsika tsara indrindra na aiza na aiza izay nahazo ny statuettes volamena 6. Ny sarimihetsika nalaina indrindra dia ny "Fahafatesana" sy "Avatar" (9).
Chuck Israels (* 10 August 1936) dia mpilalao jazz Amerikana. Teraka tany New York City izy ho an'ny fianakaviana mozika. Hatramin'ny 1959 dia mpikambana ao amin'ny sextet George Russell. Nandritra ny taona 1961 ho 1966 izy dia nanao ary nirakitra ho mpikambana ao amin'ny piano trio Bill Evans. Taty aoriana dia niara-niasa tamin'ny mpihira hafa izy, anisan'izany i Rosemary Clooney, Herbie Hancock, Judy Collins, ary Patti Austin. Tao amin'ny 1997 dia nandrakitra ny rakikira niaraka tamin'ny orkestra orkestra Holandey Orkest.
Andrew Steven Soderbergh (* 14. 1963 Janoary Atlanta, Georgia) dia American talen, cinematographer, screenwriter, tonian-dahatsoratra, mpamokatra, ary (indrindra fa ny filma) koa tsindraindray mpilalao sarimihetsika. Tsy 1,83 m lava.
Rai 3 no fahatelo fandaharana amin'ny fahitalavitra-panjakana Italiana Rai.CharakteristikaRai 3 dia natao indrindra fa mitaky mpijery sy ny fandaharana raharaha amin'izao fotoana izao indrindra, resaka fampisehoana, fanatanjahan-tena (alternating amin'ny Rai Fanatanjahantena), tantara ara-boajanahary sy ny horonantsary fanadihadiana ho an'ny mitaky mpihaino. Ireo haino aman-jery Hollywood, serials, fifaninanana na fampisehoana tena izy dia niely be fotsiny. Ny fandaharanasa dia manasongadina ny fivoarana ara-politika any Italia sy izao tontolo izao. Nalefa malalaka avy amin'ny satelita Hot Bird ilay fandaharana.
Golden Globe ny tsara indrindra mpilalao ao amin'ny tantara loka Hollywood Foreign Press Association (Eng. Hollywood Foreign Press Association HFPA fanafohezanteny) tao amin'ny lanonana Globes Golden. Ny sokajy voalohany no atao hoe tsara indrindra mpilalao sarimihetsika sy nahazo hatramin'ny 1943. Ao 1950 ny fitsipika no niova, ary namorona sokajy roa - Best mpilalao sarimihetsika ao amin'ny Tantara an-tsehatra sy ny tsara indrindra mpilalao sarimihetsika ao amin'ny mampihomehy / mozika.
Tsy feno ny lisitry ny mpihazona ny Order ny Zavakanto sy literatiora French republikyČeští mpihazona ny Commandeur de Arts, et LettresVáclav Havel - mpanoratra tantara tsangana sy ny filoha teo aloha an'i Tsekôslôvakia sy ny Repoblika Tseky (2001) Officier de Arts, et LettresBohumil Hrabal - spisovatelChevalier de Arts de LettresAdolf Teraka - Czech mpanao hoso-doko sy grafikVáclav Boštík - Czech malířPetr Eben - Czech mpamoron-kira sy varhaníkAnna Fárová - Czech-frantsay mpahay tantara sy ny zavakanto překladatelkaHana Hegerová - Czech mpilalao sarimihetsika sy šansoniérkaMagdalena Leather - Czech tantara an-kira pěvkyněRadoslav Kvapil - Czech klavíristaJiří Menzel - Czech sarimihetsika sy tantara an-tsehatra režisérJan Saudek - Czech fotografBořek Sipek - Czech mpanao maritrano sy ny designérJan Vladislav - Czech poeta sy překladatelEva Zaoralová - Czech sarimihetsika publicistkaZahraniční mpihazona ny Commandeur de Arts, et LettresDirk Bogarde - anglisy mpilalao (1990) Bono - fitarihana mpihira ny irlandey Skupi NY U2 (2013) David Bowie - anglisy mpihira sady mpamoron-kira (1999) Ray Bradbury - Baiboly mpanoratra (2007) Sean Connery - Scottish mpilalao (1987) Bob Dylan - American mpihira (1990) Clint Eastwood - American mpilalao sarimihetsika (1994) Audrey Hepburn - British mpilalao sarimihetsika sy ny masoivoho ny UNICEF (1987) Jean-Marie Klinkenberg - Belzika momba ny teny sy ny semiotician (2010) Emir Kusturica - serbianina talen (2007) Roger Moore - Britanika mpilalao (2008) Joaquín Rodrigo - Espaniola mpamoron-kira (1998) Ringo Starr - anglisy mozika mpikambana ao amin'ny The Beatles (2013) Meryl Streep - American mpilalao sarimihetsika (2003) Donald Sutherland - ny Canadian mpilalao (2012) Bruce Willis - American mpilalao sarimihetsika (2013) Officier de Arts, et LettresTim Burton - Baiboly tale, screenwriter sady mpanoratra (2010) Elton John - anglisy mpihira, mpamoron-kira sy mpitendry piano (1993) Danielle Steel - Baiboly mpanoratra (2002) Chevalier de Arts, et LettresGeorge Clooney - American mpilalao sarimihetsika (2007) Paulo Coelho O - Breziliana mpanoratra (1999) Patrick Demarchelier - Photographer (2007) Viera Ďuricová - Slovaky sarimihetsika mpandika teny (2015) Julia Kristeva - Franco-Boligara mpanoratra (1987) Joda Lalàna - Britanika mpilalao (2007) Ester Martinčeková-Šimerová - Slovaky mpanao hoso-doko sy ny scenographer (2001) Sherrill Milnes - Baiboly baritone (1996) Kylie Minogue - Australian mpihira (2008) Peter Molyneux - Britanika mpamorona ny lalao video (2007)
John Pizzarelli (* 6 Aprily 1960) dia mpilalao jazz Amerikana. Ny rainy Bucky Pizzarelli dia mpilalao jazz ihany koa ary ny zandriny lahy Martin Pizzarelli, jazz bass player. Nandritra ny asany, izay nanomboka tamin'ny fiandohan'ny taona 1980, dia nomeny alalana tamin'ny alàlan'ny alahelony sy tambajotra maromaro niaraka tamin'ny rainy izy. Nandritra ny asany dia niara-niasa tamin'ny mpihira hafa koa i George Shearing, Jessica Molaskey, Ray Brown, Buddy DeFranco, Rosemary Clooney ary James Taylor. 2012 dia namoaka ny autobiografie antsoina hoe World on a String: A Memoir.
Ny lokan'ny lokangona volamena ho an'ny horonan-tsarimihetsika tsara indrindra dia iray amin'ireo Golden Globe Awards izay natolotry ny Hollywood Foreign Press Association (HFPA) isan-taona. Ny mpandresy voalohany nahazo an'io loka io dia George Seaton, izay nahazo azy tamin'ny 1948 noho ny horonan-tsary momba ny fahagagana tao New York film.
Amal Clooney, zazavavy Alamuddin (* 3. 1978 Febroary Beirut) dia Britanika mpisolovava, mpikatroka sy mpanoratra, avy any Libanonu.V fampiharana ny lalàna misahana manokana ny lalàna iraisam-pirenena, ny lalàna ny heloka bevava, ny zon'olombelona sy ny extradition. Nampiseho ihany koa an'i Julian Assange, mpanorina WikiLeaks na Praiminisitra Okrainiana taloha Yulia Tymoshenko.
Jan Kanyza (* 25. 1947 Oktobra Lipník) dia Czech sarimihetsika sy ny fahitalavitra herec.Život In 1966 Nahazo diplaoma tamin'ny sekoly Hejčín fitsipi-pitenenana, in 1970 dia tonga nahazo diplaoma tamin'ny Akademia ny Prague Nanao Arts. Nianatra teo ambany fitarihan'ny Profesora Milos Nedbal izy. Miasa eo amin'ny sehatry ny loko izy, izay tena mahafinaritra azy. Nasehony koa ny sariny tany Etazonia, Alemana, Frantsa ary Soeda. Izy no mpanoratra sy mpanao sary sokitra ho an'ny ankizy. Tsy dia fantatry ny maro loatra fa fialam-boly iray hafa dia sary, izay ilàna azy ho toy ny asa tanana hafa.
Ny "fitanisan-tsaina amin'ny saina mahatsiravina" dia tantara mampihetsi-panahin-tantara ao amin'ny American-Britanika-Anglisy sy ny famokarana 2002. Ny sehatra Charlie Kaufman dia nanoratra momba ny antony iray ihany, ary i George Clooney dia nandrakitra ny laharana voalohany.
Ny 2 (Roambinifolon'ny Amerikana Amerikana) dia sarimihetsika amerikana avy amin'ny 2004. Ny talen'ny sarimihetsika dia Steven Soderbergh. George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon, Bernie Mac, ary Elliott Gould dia nanatontosa ilay sarimihetsika.
Ny 3 (Thirteen ambin'ny folo an'i Ocean) an'i Danny dia sarimihetsika amerikana amin'ny 2007. Ny talen'ny sarimihetsika dia Steven Soderbergh. George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon, Bernie Mac, ary Elliott Gould dia nanatontosa ilay sarimihetsika. Izany no faharoa amin'ny fandresen'i Danny.
Ny Hollywood Reporter dia gazetiboky Amerikana mipetraka any Los Angeles. Ny orinasa William Wilkerson no nanangana tamin'ny Septambra 1930. Taorian'ny nahafatesany tao 1962, ny vadiny, Tichi Wilkerson Kassel, dia nandray ny andraikitry ny mpitory. Namidiny tamin'ny 1988 tao amin'ny BPI izany. Ny tena ifantohan'ilay gazety dia ny orinasan-tsarimihetsika sy ny fialamboly, saingy mifantoka amin'ny sehatra hafa toy ny lamaody, teknolojia ary politika. Ao amin'ny pejin-doharin'ny gazetiboky dia misy sarin'ny olona samihafa; toa an'i George Clooney, Leonardo DiCaprio sy Angelina Jolie.
Fantastic Mr. Fox dia sarimihetsika amerikana novokarin'ny 2009. Talen'ny sarimihetsika dia Wes Anderson. George Clooney, Meryl Streep, Jason Schwartzman, Bill Murray ary Willem Dafoe dia nanatontosa ilay sarimihetsika.
Ny Golden Globe Awarding Year dia notontosan'ny 15. Janoary 2012 ao amin'ny Hotel Beverly Hilton any Beverly Hills, Los Angeles. Ny gala dia natolotry ny mpilalao britanika britanika sady mpilalao Ricky Gervais fanintelony. Ny Fikambanana Hollywood an'ny Foreign Journalists dia nanambara ny fanendrena ny 15. Desambra 2011.
Batman sy Robin (anglisy ao amin'ny Batman & Robin) dia sarimihetsika Amerikana iray avy amin'ny 1997, izay notifirin'i Joel Schumacher araka ny tantara tantara an-tsary momba an'i Batman. Ny lohatenin'ny lohateny dia nalain'i George Clooney, izay nisolo an'i Vale Kilmer sy Michael Keaton, izay nilalao Batman tamin'ny sarimihetsika teo aloha. Ao amin'ny sinema amerikana, sarimihetsika 125 amin'ny vola an-tapitrisany no sarimihetsika, nasehon'i 20. Jona 1997, mitaky vola 238 207 122 dolara. Ity no fizarana fahaefatra sy farany ny andiam-panorenana Batman 80. ary 90. flight 20. taonjato.
Michael Clayton dia miavaka Amerikana horonantsary avy amin'ny tale Tony Gilroy George Clooney 2007 starring, Tom Wilkinson, Tilda Swinton sy Sydney Pollack. Ny horonantsary manaraka ny fotoam-pitsarana ny mpisolovava Michael Clayton kolegovým hiatrika tampoka firodanan'ny ara-tsaina, ny kolikoly sy ny fiokoana momba ny be mpanjifa ny lalàna mafy orina, orinasa, izay nametraka kilasy hetsika noho ny vokatry ny poizina agrochemicals.